Deegaan | Radio Himilo | Page 6
Home / Deegaan (page 6)
Sababta Indonesia ka dhigtay mid u nugul dhulgariirada iyo Tsunamiga?
Ahmed Haadi December 23, 2018
Himilo FM – Ku dhawaad 168 qofood ayaa ku dhintay halka 745 qofood ku dhaawacmeen Tsunami ku dhuftay marin-biyoodka Sunda ee dalka Indonesia sida laga soo xigtay saraakiisha dowladda. Mowjado Tsunami ah ayaa la dareemay xalay iyadoo aysan jirin digniin ...
Imaaraadka Carabta oo ganaaxaya dadka wasaqeeya wadooyinka
Ahmed Haadi December 19, 2018
Himilo FM – Booliiska dalka Imaaraadka Carabta ayaa soo saaray go’aan cusub oo lagu ganaaxayo dadka wasaqeeya wadooyinka ee tuba qashinka. Darawalada gawaarida saaran ee qashinka dhiga wadooyinka ayaa lagu ganaaxayaa lacag dhan 270 kun oo doolar iyadoo laga calaameynayo ...
Dhuxushu – deegaan dooriye indhaha laga datay!
Himilo FM – Isticmaalka dhuxusha waxa uu ahaa soo jireen,balse waxa uu sii laba-laxaadsaday markii loo arkay il ganacsi, dadkuna ay u bateen magaalooyinka, waxyaabaha kale ee kor u qaaday isticmaalkeeda waxaa kamid ah saboolnimada iyo dawlad la’aanta. 50% dhuxusha ...
Hindiya: Khatarta daanyeero loo caal waayay!
Ahmed Haadi December 18, 2018
Himilo FM – Xukuumadda Hindiya waxay wajahaysaa doorashooyin adag sannadka soo socda hase ahaatee waxaa marka hore looga baahan yahay inay la tacaasho arrin ka culus mucaaradka oo ah daanyeerada khatarta ku haya xarumaheeda magaalada New Delhi. Daanyeerada ayaa fowdo ...
Xog ku saabsan marin-biyoodka ugu mashquulka badan adduunka
Ahmed Haadi December 15, 2018
Himilo FM – Kanaalka Suweys waa marin-biyood laga sameeyay Masar kaasi oo xiriiriya badaha Mediterranean-ka iyo badda cas. Kanaalkani waxa uu Masar u leeyahay ahmiyad weyn, waana il-dhaqaale wanaagsan ka soo galo dalkaasi. Tirada marakiibta isticmaashay kanaalkani sannadkii 2013 ayaa ...
Hindiya: 1 milyan oo qofood ayaa u dhinta wasaqda hawada sannad kasta
Ahmed Haadi December 9, 2018
Himilo FM – Baaritaan cusub ayaa muujiyay in ku dhawaad 1.2 milyan oo qofood inay u dhinteen wasaqda hawada dalka Hindiya sannadkii la soo dhaafay ee 2017. Waxay ka dhigan tahay tiradan 12% guud ahaan dhimashada lala xiriiriyo wasaqda hawada caalamka ...
Ahmed Haadi December 5, 2018
MagaaladaTulsa ee dalka Mareykanka ayaa billowday dadaal lagu dhiira-gelinayo inay dad badan u soo guuraan magaaladaasi oo dooneysa inay xoojiso fursadaha koriimada dhaqaalaha kaddib markii inta badan dadkii degganaa u dhaqaaqeen magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka. Magaalada Tusla oo katirsan gobalka ...
Waa kuwee dalalka ugu cimilada kulul meerayaha Dhulka?
Ahmed Haadi November 29, 2018
Muqdisho – Bogga “Business Insider” ayaa warbixin kooban ka qoray dalalka ugu cimilada kulul caalamka, waxaana inta badan dalalka noqdeen kuwa qaaradda Afrika dhaca. Liiska dalalka laga tilmaamay kuleylka waxaa kaalinta koobaad ka timid Jabuuti oo heer kulkeeda uu gaaro ...
Wasaqeynta Deegaanka – Halis Mugdi gelinaysa Mustaqbalka Beritto!
Muqdisho – Wasaqowgu waa mid kamid ah dilayaasha dunida ugu waaweyn kaas oo saameynaya in ka badan 100 milyan oo qof. Taasi waxay tiro ahaan la siman yahay cudurrada waaweyn sida Duumada iyo feyruska dilaaga HIV. Si kale marka loo ...
Maxaad ka og tahay dhibaatada bacdu ku heyso nolosha iyo deegaanka?
radio himilo September 5, 2017
Muqdisho – Waxaad maalin kasta ku ridataa adeegga iyo alaabada aad sidato. Waxaad jidadka ku aragtaa in kale oo baco ah oo dabeyluhu hadba dhinac u xoorayaan. Hayeeshe waligaa ma is-weydiisay imisa bac ayaan maalinle u isticmaalnaa? In intee la’eg ...